WordPress ကိုပျက်ကွက်ပါသလား။ FTP မကျသလား | Martech Zone
WordPress ကိုပျက်ကွက်ပါသလား။ FTP မကျသလား
သောကြာနေ့, ဒီဇင်ဘာလ 31, 2010 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 30, 2011 Douglas Karr
မကြာသေးမီကကျွန်ုပ်တို့တွင် WordPress နှင့်အသုံးပြုရန်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်ဆာဗာများကိုပြုပြင်ပေးသော client ရှိခဲ့သည်။ ဘယ်အချိန်မှာမကြာသေးမီ 3.04 လုံခြုံရေး နောက်ဆုံးပေါ် update ကိုရရှိခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်အားလုံးအတွက်ဤ version ကို install လုပ်ရန်အရေးတကြီးလိုအပ်ချက်ရှိသည်။ သို့သော်၊ ဤ client သည်အထူးသဖြင့် WordPress ကို manually upgrade လုပ်ရန်အမြဲတမ်းလိုအပ်ခဲ့သည်။
ကျနော်တို့ပုံမှန်မရဘူး "ဖိုင်တွေရေးလို့မရဘူးဒီဘလော့ဂ်ပေါ်မှာ "အမှား။ အဲဒီအစားကျနော်တို့ကို FTP ကို ​​login နှင့်အတူမျက်နှာပြင်ပေးခဲ့သည်။ ပြproblemနာမှာကျွန်ုပ်တို့သည် FTP အထောက်အထားများကိုဖြည့်စွက်ခြင်းဖြစ်ပြီး၎င်းကိုပြည့်စုံစေလိမ့်မည် မအောင်မြင်သေးဘူး... ဒီအချိန်ကောင်းသောအထောက်အထားများအပေါ်အခြေခံပြီး!
Indiana's Lifeline Data Centres မှာငါတို့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အဆက်အသွယ်ရခဲ့တယ် အကြီးဆုံးဒေတာစင်တာအကြောင်းကတော့၊ သူတို့မှာ Apache geeks တချို့ရှိပြီးသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဆာဗာတွေကို configure လုပ်ထားကြလို့ပါ။ သူတို့ကကျွန်တော့်ကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းဖြေရှင်းနည်းတစ်ခုပေးတယ်၊ FTP ထဲကို FTP ထဲကိုတိုက်ရိုက်ထည့်တယ် wp-config.php FTP အထောက်အထားများကို hardcode ရန်ဖိုင်
သတ်မှတ် ('FTP_HOST', 'localhost'); သတ်မှတ် ('FTP_USER', 'username'); သတ်မှတ် ('FTP_PASS', 'စကားဝှက်');
အကြောင်းပြချက်အချို့အတွက်ပုံစံတွင်အလုပ်မလုပ်သောတူညီသောအထောက်အထားများသည် configuration file ထဲတွင်ထည့်သောအခါအလွန်ကောင်းမွန်သည်။ WordPress ကို FTP မလိုပဲလုပ်သလိုလုပ်သည်။ update ကိုကလစ်နှိပ်ပါသွား!
အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်အခမဲ့ဗီဒီယိုများ Google နှင့် AMEX ထုတ်လုပ်သည်
31:2010 pm တွင်ဒီဇင်ဘာလ 3, 54 တွင်
ကျွန်ုပ်၏ဆာဗာကို ပြန်လည်တည်ဆောက်ပြီး WordPress ထည့်သွင်းမှုအသစ်ကို လှည့်ပတ်ပြီးနောက် WordPress အလိုအလျောက် မွမ်းမံမှုအမှားများကို ကျွန်ုပ်ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။ ကျွန်ုပ်၏ပြဿနာသည် WordPress မဟုတ်ဘဲ Firefox မှ ဖြစ်ပေါ်လာသည် - အခြားသူများသည် ၎င်းတို့၏ FTP အသုံးပြုသူအမည်နှင့် WordPress အသုံးပြုသူအမည်သည် ကျွန်ုပ်နှင့် တူညီနေပါက (စာလုံးကြီးနှင့် စကားဝှက်များ ကွဲပြားသော်လည်း) အခြားသူများက အလားတူပြဿနာမျိုး ကြုံတွေ့ရနိုင်သည်။
ပြဿနာမှာ Firefox သည် သင့်တွင် “စကားဝှက်များကို မှတ်မိသည်” ကို ဖွင့်ထားပါက၊ စကားဝှက်မန်နေဂျာတွင် သိမ်းဆည်းထားသည့်အရာအပေါ် အခြေခံ၍ အသုံးပြုသူ/pass ကို အလိုအလျောက် ပြုပြင်ပေးမည် ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏အခြေအနေတွင်၊ ကျွန်ုပ်၏ WordPress အထောက်အထားများကို သိမ်းဆည်းထားသော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်၏ FTP အထောက်အထားများကို ဆိုက်ထဲသို့ SSH တွင်အသုံးပြုနိုင်သောကြောင့် ၎င်းတို့ကို မရရှိနိုင်ပါ။ ဤအခြေအနေရှိလူများသည် WordPress အလိုအလျောက်မွမ်းမံခြင်းကိုအသုံးပြုရန်ကြိုးစားသည့်အခါ သို့မဟုတ် ဤအပြုအမူကိုပြုပြင်ရန်အတွက် WordPress တွင် ကုဒ်အပိုင်းအစတစ်ခုကိုအသုံးပြုသည့်အခါ ၎င်းတို့၏စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်မှုများ/ရွေးချယ်မှုများတွင် "စကားဝှက်များကိုမှတ်မိရန်" ကို ယာယီပိတ်ထားနိုင်သည်။
ဇန်နဝါရီ 1, 2011 မှာ 4: 23 AM
Apache ၏ home build နှင့် တူညီသော ပြဿနာရှိခဲ့ပါသည်။ အချို့သော ဖိုင်များနှင့် လမ်းညွှန်များတွင် မလျော်ကန်သော ခွင့်ပြုချက်များနှင့် ပိုင်ဆိုင်မှုများကြောင့် ဖြစ်သည်ကို တွေ့ရှိရပေသည်။
အထက်ဖော်ပြပါလင့်ခ်တွင် ftp အထောက်အထားများကို အသုံးမပြုဘဲ ပြဿနာကို မည်သို့ပြင်ရမည်ကို ထိုးထွင်းသိမြင်စေပါသည်။ သင်၏ user directory တစ်ခုလုံးကို 775 (သို့မဟုတ) ရေးပြရန် ကျွန်ုပ်အကြံပြုလိုပါသော်လည်း ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်အား လမ်းကြောင်းမှန်သို့ ဦးတည်စေပါသည်။
ဇန်နဝါရီ 3, 2011 မှာ 7: 21 AM
ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော ဖြေရှင်းချက်များကို ရှာဖွေနေသည့် အခြားဘလော့ဂါများအတွက်- အခြားဘလော့ဂါသည် ၎င်း၏ .htaccess ဖိုင်တွင် အောက်ပါတို့ကို ထည့်ခြင်းဖြင့် ၎င်း၏ host မှ php5 ကို အသုံးပြုရန် အတင်းအကြပ် ဖိအားပေးခြင်းဖြင့် ၎င်း၏ အလိုအလျောက် အပ်ဒိတ်ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းခဲ့သည်-
ဇန်နဝါရီလ5ရက် 2011 ခုနှစ် ညနေ 12 နာရီ 19 မိနစ်
ဗဟုသုတမျှဝေခြင်းအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည်၊ ကျွန်ုပ်သည် autoupdates များနှင့် ပြဿနာများကို ကြုံတွေ့ခဲ့ရသော်လည်း ကျွန်ုပ်တွေ့သော တစ်ခုတည်းသော အဖြေမှာ plugins များကို ပိတ်ထားပြီးနောက် WordPress ကို အလိုအလျောက်အပ်ဒိတ်လုပ်ပြီး နောက်ဆုံးတွင် plugins အားလုံးကို ပြန်လည်တုံ့ပြန်ခြင်းဖြစ်သည်။
ဤအကြံပြုချက်သည် မတူညီသောပြဿနာတစ်ခုအတွက်ဖြစ်သည်၊ သို့သော် ၎င်းကိုမည်သို့ဖြေရှင်းရမည်ကိုသိရန်ကောင်းပါသည်။